Realme V15: endri-javatra, tsipiriany, vidiny ary misy | Androidsis
Realme V15, ny elanelam-potoana vaovao sy mora vidy miaraka amin'ny efijery 5G sy AMOLED
Misy smartphone finday avo lenta vaovao eo an-tsena, ary izy io no Realme V15. Ity fitaovana ity dia tonga miaraka amin'ny fifandraisana 5G nomen'ny iray amin'ireo chipset Mediatek vaovao sy mahery indrindra ho an'io faritra io, izay tsy iza fa ny Dimensity 800U.
Ny finday dia mirehareha amin'ny famolavolana firazanana, manana efijery misy sisiny tery (afa-tsy ny saokany) ary lavaka ho an'ny fakantsary selfie. Ny toetrany sy ny pitsopitsony ara-teknika dia tsy dia taraiky any aoriana, ary ireto dia aseho etsy ambany.
1 Ny rehetra momba ny Realme V15 vaovao miaraka amin'ny fifandraisana 5G
Ny rehetra momba ny Realme V15 vaovao miaraka amin'ny fifandraisana 5G
Hanombohana azy, ny Realme V15 dia terminal izay tonga miaraka aminy efijery teknolojia AMOLED ary diagonal 6.4 santimetatra. Ny fanapahan-kevitr'ity tontonana ity dia FullHD + an'ny 2.400 x 1.080 teboka, ka miteraka 20: 9 ny endrika fampisehoana. Ity efijery ity dia mirehareha amin'ny lavaka eo amin'ny zoro ankavia ambony izay misy fakan-tsarimihetsika fakantsary 16 MP miorina amin'ny f / 2.5 aperture. Ny zava-misy iray hafa dia ny tahan'ny fanavaozana ny efijery dia ny mahazatra 60 Hz, fa ny tahan'ny valin'ny fikasihana dia avo roa heny, manodidina ny 180 Hz.
Ny chipset izay miaina ao an-kibon'ity elanelam-potoana ity dia ny Dimensity 800U, iray amin'ireo filokana farany avo lenta an'ny Mediatek. Ity singa ity dia valo fotony, manana haben'ny node 7 nm ary miasa amin'ny famantaranandro famaranana 2.4 GHz. Ny GPU izay mameno ity sehatra finday ity dia ny Mali G57.
Misy ihany koa ny kinova RAM, izay 6 sy 8 GB amin'ny karazana LPDDR4X. Ny habaka fitehirizana anatiny dia mitovy amin'ny tranga roa: 128 GB an'ny karazana UFS 2.1. Ho setrin'izany, misy batterie mahazaka 4.310 mAh izay mirehareha fa mifanentana amin'ny haitao haingam-pandeha haingam-pandeha 50 W, izay afaka mameno ny finday mandritra ny adiny iray hatramin'ny 0% ka hatramin'ny 100%.
Ny rafitry ny fakantsary izay hitantsika ny Realme V15 dia triple iray misy solosaina lehibe 64 MP miaraka amina f / 1.8 aperture, zoro 8 MP misy zoro f / 2.3 ary sensor makro 2 MP misy vavahady f / 2.4. Mazava ho azy, misy tselatra LED indroa amin'ny maodelin'ny fakantsary aoriana hanazavana ny seho maizina indrindra.
Safidy fifandraisana no tafiditra ao 5G NSA sy SA, Wi-Fi ac (2,4, 5 GHZ), Bluetooth 5.1, GPS ary seranan-tsambo USB karazana C. Ny rafitra fiasa nanehoana ny finday dia Android 10. Izany dia eo ambanin'ny sosona fanaingoana Realme UI. Misy ihany koa ny mpamaky rantsantanana hita eo ambanin'ny efijery.
SCREEN 6.4-inch AMOLED miaraka amin'ny famaha FullHD + 2.400 1.080 x 20 teboka ary tahan'ny lafiny 9: XNUMX
PROCESSOR Mediatek Dimensity 800U miaraka amin'ny Mali-G57 GPU
TOERANA FITONDRANA AN-TANY 128 UFS 2.1 mivelatra amin'ny alàlan'ny karatra microSD
CAMERA REAR Telo: 64 MP main miaraka amin'ny zana-kazo f / 1.8 + zoro 8 MP misy zoro f / 2.3 + makro 2 MP miaraka amin'ny zoro f / 2.4
CAMERA HATRANY MP 16 miaraka amina f / 2.5 aperture
BATERA 4.310 mAh misy fiampangana haingana 50-watt
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 10 eo ambanin'ny Realme UI
CONNECTIVITY 2.4 GHz tarika Wi-Fi / Bluetooth 5.1 fanjifana ambany / port USB-C / GPS / Headphone jack / 4G / 5G NSA sy SA
ASA hafa Mpamaky ny dian-tànana eo ambanin'ny efijery / Dirac Sound / Hi-Res Certificate / Dual NanoSIM
Ny Realme V15 dia nambara, natolotra ary natomboka tany Sina. Noho izany, any io ihany no azo vidiana, na dia azo antoka aza fa halefa any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao (tafiditra ao Eropa). Na izany aza, tsy fantatsika hoe rahoviana izany no hitranga.
Ny terminal dia ho hita amin'ny volomboasary, manga ary volondavenona mainty amin'ny kinova roa (6/128 GB sy 8/128 GB). Ireto ny vidin'ny ofisialy nanombohana ny finday:
Realme V15 6/128 GB: 1.499 189 yuan (eo ho eo amin'ny XNUMX euro novaina).
Realme V15 8/128 GB: 1.999 251 yuan (eo ho eo amin'ny XNUMX euro novaina).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Realme V15, ny elanelam-potoana vaovao sy mora vidy miaraka amin'ny efijery 5G sy AMOLED
Fampitandremana ho an'ireo tantsambo: ny hafanana tena ambany dia "mampangatsiaka" ny baterin'ny findainao; hazavainay ny antony